#Baaq ku socda beelaha Deggan Muqdisho si xal loo helo Dhibataddana loga Baxo | Get Latest News From Horn of Africa |
Waxaa laga yaabaa in ay qaarkiin ila yaabaan balse baaqeygan maanta waa xaq, xaqanna haddii uu qaraar yahay xitaa waa la sheegaa.
Sidaas darteed, farriinteyda wada aqri, haddii aad ku qanacdidna sii faafi walaal.
Waxaan halkan baaq niyaddeyda ka soo go’ay uga soo jeedinayaa ODAYAASHA DHAQANKA, CULUMAA’UDIINKA iyo SIYAASIYIINTA beelaha MUDULOOD, MURUSADE & MADARKICIS, waxaana ugu baaqayaa in ay GOGOL NABADEED oo DIB U HESHIISIIN ah dhigaan
Marka 1aad waa in ay iyaga ka heshiiyaan colaaddii dhex martay horraantii sagaashamaadkii, isla qaataan nabad iyo wadanoolaansho ku dhisan walaaltinimo iyo isjaceyl.
Marka 2aad waa in ay gogol nabadeed u dhigaan Soomaalida inteeda kale, kuna dadaalaan in laga heshiiyo wax walba oo dhacay inta ay doonaanba hala ekaadaan e.
BAAQAN waxaa iga keenay xanuun iyo qalbi gubasho ay igu heyso dhibaatada mar walba ka dhaceysa Magaalada Muqdisho oo ay sababteeda ugu weyni tahay bulshadii oo aan isku duubneyn iyo cadow naxariis laawi ah oo ka faa’iideysanaya kala qeybsanaantaas bulshada, una diidaya nolol iyo hana qaad midna.
Seddaxdan beelood ee aan xusay waa kuwa ugu waaweyn hubka, dhaqaalaha iyo siyaasaddaba, la’aantood aysan Muqdisho talo u go’in loona goyn karin. Dad badan oo isla beelahan ah ayaa hubka uu gacanta ugu jiraa iyaga oo aan rabitaan hub u heysan oo balse la’ damaanad qaad amni iyo mid nabadeed. Taas darteed, waxaa hubaal ah in haddii laga heshiiyo sababta hubka loo heysto, hubkana la maareyn kari lahaa, ammaankana wax weyn laga qaban kari lahaa.
Si taasi loo gaaro, waxaa habboon in xaalka si dhab ah loo eego oo meesha ay arrinta jirto runta laga abbaaro. Anigana fikirkeyga shaqsiga ah waxaa uu i tusay in sida ugu habboon ee ay wax isku bedeli karaan ay tahay in ay heshiiyaan beelaha MUDULOOD, MURUSADE & MADARKICIS, kana heshiiyaan wixii u rahman ee ah dhibaato bulshada dhex martay ee aan horey looga heshiin, kuwaas oo keenaya in aan la is aaminin oo cid walba gaar u hubeysnaato. Haddii ay beelahan heshiiyaan Soomaali inteeda kale oo dhan waxaa ay ku gowracan tahay heshiiskoodaas, waana mid noqon kara furaha nabadda aan maanta baadi goobeyno.
Waxaa laga yaabaa in aad ila yaabban tahay, balse aan dib u jalleecno TUSAALIHII SOMALILAND & PUNTLAND iyo sababta ay maamulladaas u noqdeen kuwo shaqeeya oo ka gudba culeysyo badan oo hakin lahaa!